थाहा खबर: सुदिप रेग्मी
यस कारण कम्प्युटर अपरेटर पद खारेज गर्नुहुँदैन
काठमाडौं : नेपाल सरकारले 'ई-गभर्नेन्स'लाई महत्त्वपूर्ण योजनाका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। देशका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू 'कम्प्युटर प्रिन्ट' नागरिकता वितरण गर्न थालेका छन्। लोक सेवा आयोग, यातायात कार्यालय, राहदानी विभागलगायतका केही निकायहरूले ...
छिमेकी मुलुक चीन, भारतको विकास र उन्नतिको पछाडि भाषा नै रहेको छ। त्यहाँका विद्यार्थीहरू शब्‍दकोषका ठेलीहरू नपल्टाई आफ्नै भाषामा ज्ञान विज्ञानका क्षेत्रमा अगाडि बढेका छन्। जति पनि समृद्ध मुलुकहरू हेर्ने हो भने पनि उनीहरू आफ्नै भाषाबाट विकास गरिरहेका छन्। कतारदेखि क...
सबै एक ठाउँमा आएको त्यो दिन अर्थात् बैशाख १२
२०७२ बैशाख १२ गते सम्झँदा मन झसंग हुन्छ। त्यसैले पनि होला बैशाख १२ लाई कसैले सम्झनै चाहँदैन। बैशाख १२ लाई सरकारले पूरै बिर्सिएको छ। जनताले बिर्सिएका छन्। भूकम्पपश्चात भत्किएका पूर्वाधार निर्माण गर्न गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेतले बिर्सन थालेको छ। पूरै...
दिगो आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रिय आर्थिक गणना- २०७५
| चैत ३०, २०७४
नेपालमा गणनाको इतिहास लामो छ। व्यवस्थित नभए पनि जनगणना सुरु भएको नेपालमा शताब्दी बितिसक्यो। जनगणना जस्तै मुलुकमा कृषि गणना, उद्योगसम्बन्धी गणना भइरहेका छन्। गणनाको यो लामो इतिहासमा बैशाख १ गतेदेखि आर्थिक गणना कार्यक्रम सुरु हुँदै छ। आर्थिक कारोबारको आधिकारिकता...
किन हराउँछन् नागरिकता? यसरी गरौँ सुरक्षा
| चैत २३, २०७४
नागरिकता के हो? नागरिकता परिचय मात्र होइन, अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउने पत्र पनि हो। एउटा नागरिक १६ वर्ष उमेर पुगेपछि नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ। नेपालको संविधानमा १६ वर्ष पूरा गरेको व्यक्तिले सजिलै नागरिकता पाउने प्रावधानको व्यवस्था छ। नागरिकता गृह...
माननीय लालबाबु पण्डित पहिलो पटक सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा जस्तै अहिले पनि चर्चामा हुनुहुन्छ। पहिलो पटक मन्त्री हुँदा उहाँले उठाएका विषयमा मैले पनि थुप्रै समाचार लेखेँ, जति बेला म सक्रिय पत्रकारिता गरिरहेको थिएँ। निजामती कर्मचारीले डिभी, पिआर लिन नपाउ...